Bridge literacy rate, skills gap, polytechnics urged - NewsDay Zimbabwe
HomeLocal NewsBridge literacy rate, skills gap, polytechnics urged
Previous articleChegutu West election case goes to Electoral Court
Next articleChurch should be arbiter, not political actor
Kuwiriranakwanakakugarakunzwanana Garanewakomurudohamandishe August 13, 2018	At	6:22 am
Comment…Nyika ino yakanaka, inofadza vanotenda.
Mwari wangu tipeyiwo nyasha, nekuti zvose ndezvenyu.
Nyika ino yakanaka inofadza vanerudo,
Mwari tipeyiwo tsitsi Mamboo.
Nekuti zvose ndezvenyu.
Nyika ino yakanaka inofadza vakadzidza.
Mwari wangu tipeyiwo dzidzo Mamboo.
Nyika ino yakanaka, inofadza vanoshanda.
Mwari wangu tipeyiwo basa-aa.
Nyika ino yakanaka, inofadza vanofara.
Mwari wangu tipeyiwo mufaro Mamboo.
Nyika ino inofadza, inofadza vanoidaaa.
Mwari wangu tipeyiwo rudo Mamboo.
Nekuti zvose ndenyu.
Munyika marovha awanda, anodawo mabasa-aa.
Shirikadzi nherera dzawanda, dzinodawo kushandirwa.